चलचित्र 'रेड वाइन’बाट बाहिरिए पल, पुष्पको इन्ट्री - Sidha News
चलचित्र ‘रेड वाइन’बाट बाहिरिए पल, पुष्पको इन्ट्री
अमेरिकामा छायांकन हुने भनिएको चलचित्र ‘रेड वाइन’बाट नायक पल शाह बाहिरिएका छन् । यो चलचित्रमा नायक पल शाह र नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको जोडी पक्का भएको थियो । तर, चलचित्रको छायांकन सुरु नहुँदै पल शाह चलचित्रबाट बाहिरिएका छन् ।
पल शाह बाहिरिएपछि निर्माणपक्षले नायक पुष्प खड्कालाई चलचित्रमा अनुवन्धित गरिसकेको छ । श्रोतका अनुसार, पुष्पले चलचित्र साइन गरिसकेका छन् । रमेश एम के पौडेलको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्रको छायांकनका अधिकांश दृश्य नेपालमा हुनेछ । केही दृश्यको छायांकन अमेरिकामा पनि हुने निर्माणपक्षले बताउँदै आएको छ ।
चलचित्रमा सन्दिप क्षेत्रीको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ ।पल र साम्राज्ञीले पहिलो पटक एकसाथ काम गर्ने तयारी गरेपनि तत्कालका लागि अब यो टरेको छ । वुझिएअनुसार, पलले चलचित्रको कथावस्तु परिवर्तन गर्न आग्रह गरेपछि निर्माणपक्षसँग असमझदारी बढेको थियो । चलचित्र महिला केन्द्रित कथामा निर्माण हुँदैछ ।
युट्युबको ट्रेन्डिङ एकमा चलचित्र ‘दाल भात तरकारी’
खुलेनन् सिनेमा हल, थला परिसक्दा पनि सरकारले देखेन
आजदेखि हाँस्य श्रृङ्खला ‘सक्किगोनि’ प्रसारणमा आउने
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर यो सत्यता नै हो ! आमा बन्दै छ्न् श्वेता खड्का !
नायक अनमोल र नायिका उपासनाको ‘क्याप्टेन’ युटुबमा
चलचित्र ‘डिसेम्बर फल्स’ मा आर्यनको जोडी उपासना